သုတေသနလုပ်ငန်း | Urban Climate Resilience in Southeast Asia
စကျတငျဘာ 11, 2014
အရှေ့တောင်အာရှဒေသများ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ် အလျင်အမြန်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ရေး အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့သည် ဖြစ်နိုင်သည့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို တုံ့ ပြန်သည့် လိုက်လျောညီထွေအစီအစဉ်များကို မည်ကဲ့သို့ စဉ်းစားအကောင်းအထည်ဖော်မည် စသည့်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပညာဗဟုသုတများတည်ဆောက်ရန် ကမ္ဘောဒီးယား၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ရှိ အဓိကသတ်မှတ်ထား သော ဒုတိယမြို့ကြီး (၂) မြို့စီတွင် အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့၏သုတေသနလုပ် ငန်းအစဉ်တိုင်း ပြန်လှန်ဆက်နွယ်မှုရှိသော အောက်ပါမေးခွန်းများမှ ဖော်ဆောင်ပေးပါသည်။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုသည် အရှေ့တောင်အာရှဒေသ မြို့ပြနေထိုင်သူများ၏ ဆင်းရဲမှု နှင့် ထိခိုက်ပျက်စီးလွယ် ဖြစ်ခြင်းတို့အပေါ် မည်ကဲ့သို့ သက်ရောက်မည်နည်း?
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများနှင့် လက်တွေ့သုတေသနတို့မှ ရရှိသော ပညာဗဟုသုတတို့သည် အား လုံးပါဝင်အားပြု၍ ညီညွတ်မျှတသော မြို့ပြဒေသများ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ် အလျင်အမြန် ပြန်လည် ကောင်းမွန်ရေးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုစနစ် ဖန်တီးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်သည်တို့ကို သိရှိစေသနည်း?
သီးခြားအနေနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သည့်အနေဖြင့် မြို့ပြနေရာဒေသများတွင် လူမှု စီးပွားဘ၀နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အဆင်ပြေချမ်းသာမှု ပိုမိုတိုးပွားလာစေရန် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်း အလိုက်၊ အုပ်စုအလိုက်နှင့် အဖွဲ့အစည်းအလိုက် ပါဝင်အထောက်အကူပြုနိုင်မှုကို မည်ကဲ့သို့ ခိုင်မာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း?
အဆိုပါမေးခွန်းများကို ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ရာတွင် အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် သုတေသနနည်းစနစ်အမျိုးမျိုး လေ့လာ မှုအဆင့် အသီးသီးတို့ကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ၊ ကြို တင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်၍မရသည့် အရာများ၊ ဘေးအန္တရာယ်သက်ရောက်နိုင်မှု အခွင့်အလမ်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပဏာမ သတင်းအချက်အလက်များ ပြုစုခြင်း၊ မူဝါဒနှင့် သတင်းအချက်အလက် စာရွက်စာတမ်းများအား ပြန်လည်သုံးသပ် ခြင်း၊ မကြာမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော သဘာဝဘေးဒုက္ခများ ဖြစ်ရပ်လေ့လာခြင်း ရှုပ်ထွေးသောစနစ်များ စုဖွဲ့ပါဝင်သည့် သဘောတရားအပေါ် အခြေခံထားသော လူမှုရပ်ရွာနှင့် မြို့ပြစီမံကိန်း မဟာဗျူဟာများ အတိအကျ သတ်မှတ်ဖော်ပြ ခြင်း၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံများတွင် အစိုးရနှင့် အများပြည်သူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လုပ်ဆောင်မှု အခြေအနေ များ လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်း၊ ရပ်ရွာအခြေပြု လက်တွေ့လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ စနစ်တကျနှင့် အမြင်ကန့်သတ် ထားခြင်းမရှိသော အင်တာဗျူးများကို အဓိကသတ်မှတ်ထားသော အစုအဖွဲ့များတွင် လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် လေ့လာသိရှိ မှု၊ အများပြည်သူ ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုနှင့် ပြန်လှန်ဆက်သွယ်မှုတို့ကို ဝေမျှလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်သူများအား လမ်းညွှန်မှုပေးသည့် သဘောတရားရေးရာ ဘောင်သတ်မှတ်ချက် နှင့် သုတေသနလုပ်ဆောင်သူများအတွက် လမ်းညွှန်မှုပြုရန်နှင့် စီမံကိန်းမှ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့် သုတေသနဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ လျော်ကန်မှုရှိစေရန်နှင့် သုတေသနရံပုံငွေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပါရှိပါသည်။